घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू क्रोएसियाई फुटबल खेलाडीहरू लूका मोररिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य
LB पूर्ण स्टोरीज को मिडफील्ड प्रतिभाशाली को रूप मा सर्वोत्तम उपनाम द्वारा ज्ञात गर्दछ; "लकी लुका"। हाम्रो लुका मोररिक बचपन स्टोरी प्लस अनल्टल्ड जीवनी तथ्यले तपाईलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता आफ्नो बचपनको समय सम्म। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र अनलाईन भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केहि कम गर्दछ हाम्रो लूका मोररिक जीवनी जो निकै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Luka Modric Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
लूका मोड्रीक जाडो, क्रोएशियामा सितम्बर9को 1985th दिनमा जन्मेको थियो।
उनी बोस्निया युद्धको दौडान सर्बिया आक्रमणकारीहरूबाट भागिएका शरणार्थीहरूको परिवारमा जन्मिए। उनको आमा रडोजका मोड्रिरी एक पटक कपडा कार्यकर्ता र बुबा थिए, स्काइप मोड्रि, एक पटक एक सैन्य म्यानिक थियो जसले युद्धमा क्रोएशन् सैनिकहरूको कारलाई मरम्मत गरे।
लूका आफ्नो बचपन समयमा समयमा क्रोएशन् युद्धको समयमा जडारमा भयानक घटनाहरूको अनुभव गर्थे।
त्यहाँ यो केटा थियो जुन सबै दिन होटल पार्कको वरिपरि बल क्यान्सर प्रयोग गर्थे, " एनके जाड अध्यक्षको जोसिदो बाजलोका शब्दहरू थिए जब उनको प्रारम्भिक दिनमा मोडरिकमा टिप्पणी गर्दै। "उहाँ पतला हुनुहुन्थ्यो र उनीहरूको उमेरको लागि साँच्चै छोटो थियो, तर तपाईले देख्न सक्नु भएको छ कि उहाँमा केहि कुरा थियो।"
लुका लगातार उनको सानो शरीरको कारणले न्याय पुर्याएको थियो। उनलाई सानो र कमजोर मानिन्छ र कसैलाई जो फुटबलरको शरीरमा बढ्न सकेन। एक भरोसा गर्न सक्छ कि त्यो एक ठूलो खेलाडी हुनेछ। यद्यपि, बल थियो 'उनको खुट्टामा सुन्दर' को रूप मा लुका आफ्नो परिवार को होटल को कोठा को सामने मा आफ्नो स्वयं को खेल मा केंद्रित थियो।
त्यो जाँच गर्न सक्ने एकमात्र तरिका हो यदि फुटबल खेल्न योग्य छ युवा युवा परीक्षणको लागि जान्छ। अवसरको रूपमा क्यारियर सारांशमा समाहित भयो।
Luka Modric Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -क्यारियर सारांश
लूका पहिले हुडकि स्पिलिट मा एक युवा परीक्षण थियो। दुर्भाग्यवश, मान्छे को रूप मा बस को रूप मा, आवश्यक भौतिक विशेषताहरु को कमी को लागि त्यो हडु Split द्वारा अस्वीकार गरियो।
यो अझै पनि अस्पष्ट छ कि परमेश्वरले आफ्नो कथा परिवर्तन गर्नुभएको यस जीनको लागि गर्नुभयो। यो अझै पनि एक प्रकाश थियो कि लुका एक शीर्ष खेलाडी बनेको थियो। युवा लूकाले आफ्नो सबै ताकतलाई कडा कडा मेहनत गरे। पछि तिनले मानिसहरूलाई गलत धारणालाई सही गरे कि उनी शारीरिक रूपमा कमजोर र सानो थियो। यो एक पटक आएपछि उनले मान्छेलाई के भन्थे "एक संकीर्ण सफलता" डायना ज़ैग्रेब मा। यो एक थियो आफ्नो क्यारियरको लागि शुभकामना।
मोडरिक, जब क्लबमा प्रवेश गरेपछि अन्ततः धेरै विश्वास र गुणस्तर देखा पर्यो। डायनामो जगरेबले चाँडै आफ्नो सम्झौतालाई दस वर्षसम्म विस्तार गर्यो। उनीहरूले स्तरीय गतिमा स्थिर र स्थिर वृद्धि गरेका थिए र क्लबका अधिकारीहरूले धेरै वृद्धिको पूरक खुवाए।
अधिक अनुभव गर्न को लागी, लूका को डेनमो जग्रेब को लागि खेल पछि Zrinjski Mostar को लागि उधार लिया गएको थियो। यो कुरा थियो कि उनको करियर वास्तव मा उडान ले गयो। उनको बोस्निया मा इंटर Zaprešć मा एक अन्य ऋण वर्तनी पनि थियो।
धेरै परिपक्वता पछि, उसले फिर्ता आयो र 2005 मा डायनामो को लागि आफ्नो पूर्ण वरिष्ठ पहिलो बनाया। उनले तीन लगातार लीग खिताब र उनको साथ घरेलू कप जीता। लुकालाई 2007 मा वर्षको प्रवा एचएनएल प्लेयर नामकरण गरिएको थियो।
2008 मा, उनी प्रिमियर लीग क्लबमा गए टोटेनहम होट्सपुर, जहाँ उहाँले 50 वर्षमा आफ्नो पहिलो UEFA चैंपियंस लीग को उपस्थिति Spurs को नेतृत्व गरे, 2010-11 टूर्नामेंट को क्वार्टर-फाइनल सम्म पुग्यो।
2011-12 सिजन पछि, तिनी सारियो रियल म्याड्रिड £ 33 लाखको शुल्कको लागि। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
Luka Modric Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
पहिले बताए अनुसार उनको परिवार बोस्निया युद्धको शिकार थिए। तिनीहरूले सर्बिया आक्रमणकारीहरूबाट आफ्नो जीवन बचाउथे। घरको अभाव, केही लुगा र आश्रितले उनको परिवारको अवधिमा असुरक्षित भएको बेला धेरै खराब भयो। चाँडै, उनीहरूको शरणार्थी गरीब परिवारको पृष्ठभूमिले गर्दा लुका मोररिकको बुबा, स्टिपे मोररिकले क्रोएशियन सेना मेकेनिकमा एक राम्रो काम पायो।
त्यस समयमा, लूकाको दादाजी जो पनि लुका भनिन्छ, एक सैनिक थिए जसले प्रमुख शहरहरु सँगसँगै लडे। उनको जीवनको रूपमा डरलाग्दो थियो Serbian Army, the JNA and the army of the “Krajina” carry out intensive fightings and military activities in his zone. Grandfather Luka was killed by his enemies.
मृत्युपछि लूका र तिनको परिवार जादार गए। As soon as they left, they immediately lit their house in fire – says Stanko Modric,aclose relative of the Modrić family. At Zadar, they settled inacheap hotel, thanks to monies made by Luka’s father, Stipe Modric who still remains an expert mechanic. Stipe continued his mechanic job at Zadar. He provided for his family, thus making them move above the poverty line toahigher middle-class family background. It wasaZadar that Luka started playing football as stated earlier.
लूका क्यारियरको लागि धन्यवाद, युद्ध को बावजूद मडरिक को परिवार को जीवन र जीवन को कमी को पूर्णतम सीमा मा सामान्यतया। उनी लूकालाई अब धेरै अशिष्ट छन्।
Luka Modric Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
लुका मोररिक प्रेम कथा Vanja Bosnić को एक महिला को आसपास केंद्रित छ।
तिनीहरूले 2006 मा डेटिङ गर्न थाले, आफ्नो ऋण जादू डिनो जोग्रब गर्न फर्काउँदा। लुका उनको श्रीमानले आफ्नो सपोर्टको महिलाको रूपमा उनको पूर्ण भरोसा र आत्मविश्वासको विकासका लागि चाँडै बनाउनुभयो।
Vanja Bosnic लुका मोररिक पछि बलियो महिला हो। उनले लुकाको ट्राफिक लडाकुहरूको पछि लाग्ने मस्तिष्क थियो जुन सम्भवतः उनको चाल सकियो Tottenham to Real Madrid।
लूका मोड्रिकी उनको हरी आँखाको साथ मायामा अझै पागलपन छ (माथि हेर्नुहोस्), सुन्दर अनुहार, ऊँचाई र लामो मोटो सुन्दर खुट्टा तल देखिए जस्तै।
लुका मोडरिक पत्नी तथ्य
शर्मीली मोड्रीले म्यानेज बोस्निकीसँग विवाह गरेकी जेएनयुमक्सले क्रोएशियाको राजधानी जुग्रेबमा चार वर्षको डेटिङ गरे। समयको उनको टोली, वेद्रुज र्लाका, उनको सबैभन्दा असल व्यक्ति थियो।
लुका मोररिकको वेडिंग फोटो
तिनीहरूको विवाहले गर्भको फलबाट चाँडै आशिष् पायो। तिनीहरूको पहिलो छोरा, इवानो,6जुन 2010 मा जन्मिएको थियो। उनको छोरी, एमएम, 25 अप्रिल 2013 मा जन्मिएको थियो। उनकी दोस्रो छोरी, सोफिया,2अक्टोबर 2017 मा जन्मिएको थियो।
मोडरी सामान्यतया शान्त पारिवारिक जीवन बिताउँछ, उनीहरूको विनम्र शुरुआतको सबै धन्यवाद। उनी मानिन्छ कि उनी फुटबलरको रूपमा देखा पर्न र सेलिब्रिटी वा मोडेल होइनन्।
"म केवल फुटबल पिचमा मात्र राम्रो गर्न सक्दिन। म मोडेल वा केहि होइन। म फुटबल खेलाडी हुँ, " यी एक शब्दहरू रियल म्याड्रिड लीगले आफ्नो खुट्टा मैदानमा घुमाएको छ। लुकाको दिमागमा फुटबल पार गर्ने एकमात्र चीज उनको परिवार हो। उनको लागि, यो दुई F's- फुटबल र परिवार.
Luka Modric Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -FARE 'यूरो 2016 रिफिबादी XI
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। अन्य फुटबलका रूपमा तल देखेर पनि शरणार्थीहरू थिए।
हालै, विरोधी भेदभाव फुटबल नेटवर्कको रूपमा चिनिन्छ 'खाली' पहिलेका शरणार्थीहरू मनाईएका खेलाडीहरूको एक पंक्ति अप को साथ राख्नुहोस् 'विश्व शरणार्थी दिवस'।
टोलीले भाइहरू मन पराउँछन् ग्रेनाइट र ताइलेन्ट Xhaka, क्रिश्चियन बेंटे, Nani र मोड्रिक।
तिनीहरू संसारको सबैभन्दा सक्रिय सहभागीको रूपमा देखिएका छन् जसले सबै कुरा छोडेर पछि मनाउँदछन् 'विश्व शरणार्थी दिवस'।
Luka Modric Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उनले रोनाल्डोलाई जवान युगबाट मूर्ति बनाए
मोडरको एउटा नरम-स्पेस थियो, होइन CR7, तर बरु रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लिमा। क्रोएशियन एक पटक दावी गर्दै ...
"माथि बढ्दै, शिन पैडको मेरो पहिलो जोडाले उनलाई रोनाल्डोको चित्र रहेको थियो। म एक नाइके उत्पादन थियो र मैले तिनीहरूलाई माया गर्थे। मलाई रोनाल्डो मन पर्यो। पुरानो रोनाल्डो! अनि मैले ती शिनस्पदहरू वर्षौं लागे। जब म एक सानो बच्चा थिए जब मैले बोस्नियाई लीगमा व्यावसायिक खेल सुरु गरें। मैले अन्ततः उनीहरूलाई कुनै पनि व्यक्तिको रूपमा दिएका थिए भन्दा धेरै आँसुहरू थिए। "
सायद यो बाट हो ब्राजिलियन रोनाल्डो त्यो मोररिकले आक्रमणकारी तालिम कसरी तिखार्न सिके।
Luka Modric Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -जब यो सब व्हाइट हार्ट लेन मा खट्टा गयो
स्पेनिश राजधानीमा मोडरिक मायालु जीवनको साथमा अन्ततः चीजहरू चिसो भयो। थियो Tottenham जो अझै पनि घटनाहरु को बारे मा कडा महसूस गरे कि एक पल्ट उनको स्पेनी विशाल को लागि उनको स्थानांतरण सागा को पालन गरे।
क्रोएशन् उत्तर लन्डनको क्लब छोडेर दुबै पक्षमा भन्दा बढी अचम्म लागेका थिए। यो साँच्चै के भयो। 2012 को गर्मी मा, मोड्रिक ले यो स्पष्ट गरे कि त्यो एक कदम चाहता थियो रियल म्याड्रिड तर Tottenham शायद शायद समझदार थियो, उनको स्टार मान्छे को बाहिर जाने को लागि अनिच्छुक हो।
क्लब मनोनयन भएको थियो कि म्याड्रिड तिर्न पर्छ पाउन्ड 40 मिलियन आफ्नो सेवा सुरक्षित र, संग Tottenham अप्रत्यक्ष रूपमा यो कदम रोक्न, मोडरिकले प्रशिक्षित गर्न अस्वीकार गरे, आर्मेन्ड विला-बोस र कम्पनीले उनलाई दुई-हप्ताको मजदूरी ठीक गर्न थालेको थियो जुन £ 80,000 को लागी। उहाँले यसलाई भुक्तानी गर्नुभयो र अझै पनि प्रशिक्षित गर्न इन्कार गर्नुभयो। यो कहिले थियो Tottenham दिइयो र स्थानान्तरण प्रारम्भ गर्यो।
मोररिकले अन्ततः £ 30 मिलियनको लागि स्विच गरे तर बिरामीले उपभोग गर्यो Tottenham विश्वासी।
Luka Modric Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -त्यो के लागि सम्झना हुनेछ
लूका सधैं सदाको लागि सम्झने बेलायतको निम्न विशेषताहरूको लागि सम्झना हुनेछ।
सर्वोत्तम आधुनिक दिनको सबैभन्दा कम मिडफिल्डरको लागि।
उनको छिटो र क्रिएटिव प्लेमिंग क्षमताको लागि।
पिचमा उनको उत्कृष्ट दर्शनको लागि।
गल्ती पास र एकल, लामो-सीमा प्रयासहरूसँग खेलको कोर्स परिवर्तन गर्न सक्षम हुन।
दुवै फिटहरूसँग खेल्न सक्षम हुन।
उनको तेज र आक्रामक स्थिति को लागि बल बंद।
लामो वा छोटो दूरी पार गरेर सही पार गर्न सक्ने क्षमताको लागि।
अन्तमा, मास्टरको लागि 'पूर्व-सहयोग'.
DENI अक्टूबर 23, 2018 मा 12: 42 बिहान
कथा ACCURATETHAT लुका एक प्राणी को एक एक जंगली छ र धेरै धेरै छ कि त्यो उनको ग्रैंडफ्लर खोल्दछ। गीतको वर्णनमा सर्बियन सङ्गठनको 90S मा युद्धमा आफ्नो गौरवलाई त्याग्न धेरै असाध्यै छ। उनी आफ्नो आमा सर्बियन र दोस्रो विश्वमा जन्मेका छोराछोरीमा परिवार परिवार परिवारले परिवारको हतियारबाट लडाइँ गरेका थिए। KRAJINA सर्ब्सले सर्ब मानिसहरूलाई सहयोग पुर्याए र त्यसो भए कि एक्सएनक्सक्समा साम्राज्यवादी सेनाले लाखौं भन्दा बढी हतियार र त्यसोभए जसो र रोमा ग्वाईसीको मृत्यु भएको थियो। त्यसोभए यूएस अफिसरहरू र अन्य पर्यटक अधिकारीहरूले त्यस समयमा भेट्टाए कि दोस्रो विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादी सर्बियन केराजेना र एसपीपीएसके को गणोन 40 सर्बहरु लाई हराईयो। माईमक्स लुकाइस युकेले मातृभाषा मार्फत आफ्नो साम्राज्यवादी युद्धको क्रममा एसआरपीएसके क्रियजेनाको रिपब्बिकमा भएको थियो। 40 भूतपूर्व सेनाले सेरिबियन KRJJU LUKAS RELATIVES मातृभाषाको सेवनबाट सर्बियामा फैलायो अन्य मानिसहरू संगै माथिको लागि 350 000 लाख मानिसहरू सर्बियामा उनीहरूका जीवनहरू सुरक्षित गर्नका लागि उनीहरूको हातमा छुटाउन सक्थे। यो मान्छे जरुरी भएमा सताउन र सोच्न चाहन्थे। लूका हामी सबैलाई मायालु मायालु प्रेम र उहाँका सन्तानको मृत्युको लागि सबै मायालु मायालु प्रेम हुनुहुन्छ। हामी मानव मानवको रूपमा हुनुपर्छ अनिच्छा मात्र होइन आधारहरू सबै प्रकारका वरिपरिको लागि फलफूलमा भर पर्दछ। मानव बीमार छ पहिले मानव एकजना हुन्छ र मानव अधिकारमा नैतिकता हुँदैन। IMPARTIAL र गैर बिजन मानवअधिकार हेर्ने कारणले उनीहरूको पछि लागेका व्यक्तिले मानव शरीरलाई न्यानो लाग्ने उपाय देखाउँछ।
DENI अक्टूबर 23, 2018 मा 1: 17 बिहान
अन्य चीजहरू अत्यन्तै उदास हुन्छन् जब क्रोएशियाका मानिसहरू उनीहरूका उत्पत्तिहरू लुकेको छ जुन तिनीहरूका आमाबाबु हुन् वा हजुरबुबाहरू उनीहरूका मूल र संस्कृति हुन्। भाषा निरन्तर सर्बियन भन्दा फरक हुन परिमार्जन गर्दैछ, स्कूलहरूमा बोस्नियाई बालबालिकाहरू, किबोर्डगार्टनलाई सरकार बोल्न भनिएको छैन कि कसरी हजुरबुबा वा आमाबाबुले घरमा बोल्छन्। सबैले माया गर्छन् जब क्रोएशिया रातो र सेतो जर्सीमा खेल्छ। तर क्रोएशियाले ब्ल्याक र लाइट ब्ल्याक रङको जर्सी राख्नको लागी जुन 1940s र 1990s बाट अतीतको गहिरो कथा को प्रतिनिधित्व गर्दछ। यदि इटालीले कालो जर्सी खेल्नु पर्छ भने 40 हरूको अतीतको प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन धेरै दु: ख हुनेछ। क्रोएशियाले काले जर्सीमा खेल्छ जब धेरै मानिसहरू सिम्फिसी गर्दैनन् भने पनि राजनीतिले दुर्भाग्यवश क्रोएशियामा खेलकुदबाट अलग हुँदैन।
शुक्रबार धन्यवाद जुन 9, 2019 10 मा: 51 बिहान
टिप्पणी: लूका आधुनिक एक राम्रो खेलाडीको साथमा छ